သြစတြေးလျနိုင်ငံက "ကျားနှစ်" ကို ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် အထူးတံဆိပ်ခေါင်းများထုတ်ဝေ - Xinhua News Agency
သြစတြေးလျ၊ ဇန်နဝါရီ ၂၆ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နှစ်သစ်ကူး နီးကပ်လာသည်နှင့်အမျှ သြစတြေးလျနိုင်ငံက ကျားနှစ်ကို ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် တံဆိပ်ခေါင်းနှင့် ဒင်္ဂါးပြားအသစ်များ ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ တရုတ်နိုင်ငံတွင် နွေဦးပွဲတော်ဟု ခေါ်တွင်သည့် တရုတ်နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်သည် တရုတ်နိုင်ငံတွင်သာမက အခြားသော အာရှနိုင်ငံအချို့တွင်ပါ ကျင်းပသည့် အရေးအကြီးဆုံးသော ရိုးရာပွဲတော်များအနက် တစ်ခု အပါအဝင် ဖြစ်သည်။ အလွန်တန်ဖိုးရှိသော ရုပ်ပုံများနှင့် အဓိပ္ပါယ်ဖော်ထားသော တံဆိပ်ခေါင်းများသည် သြစတြေးလျနိုင်ငံသားများစွာအတွက် ၎င်းတို့၏မိသားစုနှင့် သူငယ်ချင်းများထံ ကံကောင်းခြင်းဆုမွန်ကောင်းများ ပေးပို့ရန် ရေပန်းစားသော လက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်သည်။
“ကျွန်မက ၁၂ ရာသီပတ်လုံး သုတေသနတွေ အများကြီး လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမှာ ကျွန်မ သိလိုက်ရတာက ကျားနှစ်ဆိုတာ တက်ကြွတယ်၊ ရဲရင့်တယ်၊ ဇွဲရှိတယ်။ အဲဒါကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားမိတယ်။ တချိန်တည်းမှာပဲ နှစ်သစ်ကူးရဲ့ ကျယ်ပြန့်တဲ့ အခမ်းအနားနဲ့ သင်္ကေတအားလုံးကို ကြည့်လိုက်ရင် အဲဒါက တရုတ်ပြည်နဲ့ အာရှမှာရှိတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတွေဖြစ်နေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် တရုတ်ယဉ်ကျေးမှုဟာ တရုတ်နှစ်သစ်ကူးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ သင်္ကေတတွေ အများကြီးရှိတယ်။ Mandarins ၊ Kumquats နှင့် အဆုံးမရှိ အလှဆင်ထားသောကြိုးထုံးတွေနဲ့ တရုတ်စကားလုံး “Fu” တို့ဟာ ကံကောင်းခြင်းအတွက်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီအချက်တွေကို ဒီဇိုင်းထဲမှာ ဆွဲထည့်ထားဖို့ အရမ်းအရေးကြီးတယ်လို့ ကျွန်မ ထင်ပါတယ်။ ဒီ ဒီဇိုင်းတွေကို လူတွေကြည့်ပြီး သူတိုအနေနဲ့ အာရှ သို့မဟုတ် တရုတ် သို့မဟုတ် ယဉ်ကျေးမှု တစ်ခုခုကို သူတို့ နားလည်ဖို့မလိုပါဘူး လှပတဲ့ရုပ်ပုံတစ်ပုံ၊ လှပသောဒီဇိုင်းကို ခံစားဖို့သာ လိုအပ်ပါတယ် နောက်မှ အဲဒီသင်္ကေတတွေရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို သူတို့အနေနဲ့ ပိုမိုလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒီ ဒီဇိုင်း တွေက အတော့်ကို ချစ်စရာကောင်း၊ ခေတ်မီပြီး ပျော်ရွှင်နေပုံ ပေါ်ပါတယ် ၊ ပြီးတော့ သူတို့ကို အပြုသဘောဆောင်တဲ့အနေနဲ့ ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ပုံစံ တမင်လုပ်ပြခဲ့တာပါ၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ COVID က နှစ်အနည်းငယ်ကြာနေပြီပြီးတော့ အဲဒါကို လူတွေကလည်း အတော် လေးစိတ်ပျက်နေကြပါပြီ။ ဒါကြောင့် လူတွေကို ရယ်မောပျော်ရွှင် စေမယ့် အရာတစ်ခုကို ဖန်တီးချင်တာပါ။” ဟု တံဆိပ်ခေါင်း ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သူ Chrissy Lau ကပြောပါတယ်။” (Xinhua)
GLOBALink | Australia issues “Year of the Tiger” special stamps
Australia, Jan.26 (Xinhua)– As the Lunar Chinese New Year is comming the Australian Post has issuedanew set of stamps and coins to celebrate the year of tiger. The lunar Chinese New Year, also called Spring Festival in China is one of the most important traditional festivals celebrated not only in China, but also some other Asia nations. The stamps with very payful images and patterns of symbolic meaning isapopular gift for many Australians to send wishes of good fortune to their family and friends.
“When I research each Zodiac year, I always doalot of research. So I know that the year of the tiger they’ve very active, courageous, persistent, quite stubborn. So I take that into account But at the same time also look at the wider celebration of the Lunar New Year I also look at the wider celebration of the Lunar New Year and all the symbolis, that comes with that within Chinese and Asian culture. We know in Chinesr culture especially there’s alot of symbolism to do with Lunar New Year. We Know that there’s the mandarins and the kumquats and the endless knots all decorations and the Chinese word”Fu” for fortunes. So I think it’s really important to weave these elements into the design as well. If people see hese designs they don’t need to be Asian or Chinese or any culture to understand them. They just need to enjoyanice picture,anice design and then they can find out more about the meaning behind it. And I think they’re quite cute designs, but also quite modern, and quite playfu. And I deliberately made them quite playful and cute because I guess COVID has been around forafew years now And I think it’s been quite depressing for people.So I just wanted to create something that was quite uplifting and makes people smile.”
Produced by Xinhua Global Service.